Usangotarisa pane Zano reiyo SEO Iceberg | Martech Zone
Usangotarisa pane Zano reiyo SEO Iceberg
Chitatu, September 7, 2011 Svondo, October 30, 2011 Douglas Karr
Imwe yemakambani eSEO aimbove nemufananidzo wechando pamusoro peyekutanga peji. Ini ndinoda fananidzo yechando kana zvasvika pakutsvaga injini yekugadzirisa. Kukurukurirana kwazvino kwataita nemutengi maererano nekudzoka kwavo paKutsvaga Injini Yekugadzirisa bhajeti yakabata zvimwe zvinetswa zvekuti ivo vaingowana vashoma vashanyi vakasarudzika mugore rapfuura keyword phrase isu tanga tichinangisa, kusimudzira nekutevera.
Izwi rakakosha rakasarudzika uye handina mvumo yekugovana…. asi mukudzokorora yavo analytics, ivo vakanga kungowana kushanya kushoma ... kweizvozvo chaiyo kiyi. Nekudaro, pakanga paine angangoita mazana maviri kushanya pamwedzi pakutsvaga kwakanangana nekiyi-izwi tisati tashanda mukugadzirisa. Mushure mekubudirira kwechirongwa cheSEO chakavatora kuenda ku # 200, icho chakakura kusvika kunopfuura chiuru kushanya pamwedzi. Izwi rakakosha pacharo raingogumira mukushanyirwa kushoma pamberi uye gumi neshure. Mutengi aingo kuyera iyo izwi chairo uye kwete ese akakodzera, ane hukama traffic.
Paive nemakumi maviri nematanhatu ane hukama nemazwi akakosha ekuti mutengi aiwana traffic pamberi pechirongwa. Izvo zvakakura kusvika 266 zvine chekuita nemazwi akakosha ekuti ivo vaiwana traffic parushambadziro nekusimudzira. Idzo 1,141 dzakanangana nekiyi yekutsvaga dzakatsvaga dzakapera 20,000 vashanyi vatsva kunzvimbo. Paunoverenga kudzoka pa kuti investimenti, yakatokunda. Aya mazwi anozivikanwa se refu-muswe keywords, uye pane dzimwe nguva vatengi vazhinji, mari nemukana ipapo pane kuzvirwisa nemakwikwi pamazwi akanyanya-vhoriyamu.
Chinokosha ndechekuti SEO haina kufanana nekutenga kiyi yakakosha nePPC. Organic yekutsvaga ine mukana wekukura yako traffic kuburikidza neinetiweki rese yeanoenderana kiyi kiyi mitsara. Izvi zvakakosha mukutsvaga kwako injini nzira. Kana zvese zvaunofunga zviri pa muromo wechando, hausi kuteerera kune yakakwira mavhoriyamu emigwagwa ayo ane hukama ekutsvaga mazwi ari kukuunzira.
Rimwe zano uko iyi iri nyaya ndeyekutsvaga kwenzvimbo. Highbridge munguva pfupi yapfuura yakaita ongororo yeSEO pane imwe kambani-yebasa inoshanda munyika. Kukwidziridzwa kwavo, zvirimo, yavo saiti hierarchy - yavo yese SEO zano - chete yakanangwa yakajairwa sevhisi-yakavakirwa mazwi pasina chero geography
Vanokwikwidza vari kudya masikati avo - kuwana a zvakapetwa kazana traffic nekuti vakwikwidzi vakangwara vakatarisa jogirafi zvine hukasha semusoro webasa. Kana iyi kambani yaishanda neyayo SEO chipangamazano, jogirafi haina kana kuuya mukutaurirana nekuti mavhoriyamu ekutsvaga haana kukosha. Iyo SEO nyanzvi yakatarisa pamucheto wechando ... uye yakashaiwa iyo 90% + yediki, geographic kiyi yekutsvaga.
Iyo kambani iri mudambudziko… vane nzvimbo zhinji dzekuyedza kugadzira kana vakatarisira kuve mutungamiri mukutsvaga kwakanangana nebasa. Chokwadi ndechekuti kutsvaga kwemuno ndiko izwi rekutanga pakutsvaga mabasa enharaunda. Hausi kuzotsvaga "car wash" paGoogle… urikuenda kunotsvaga yako nharaunda kana guta kuwedzera kune "mota wash". Panogona kunge pasina huwandu hwakawanda hwekutsvaga kwe "Albuquerque car wash"… asi wedzera guta rega rega muUnited States neyakagezwa mota uye ndiyo nhamba HUGE.
Zvakanaka kutungamira zano pamucheto weizi, yiyera, itarise uye uigadzirise. Nekudaro, usakanganwa kuti iwe uri kungoshanda chete nezano!
Yako Saiti Yako Inotambura Kubva Pasati Yakwana Elaboration?